Caruur Buula-burte ugu Geeriyooday Walxo ay ku Ciyaarayeen oo ku Qaraxay |
Caruur Buula-burte ugu Geeriyooday Walxo ay ku Ciyaarayeen oo ku Qaraxay
buy Super P-Force online, zithromax online. Wararka naga soo gaaraya magaalada Buula-bute ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in laba caruur ay u dhinteen mid kalana uu soo gaaraya dhaawac culus kaddib qarax ka dhashay sidda sheegay walxo loo maleynayay miino oo ay caruurtaas ku cayaarayeen.
Duqa degmada Buula-burte, Cismaan Geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu daweynayo caruurta dhaawaca ah gudaha degmada Buula-burte oo ah degmada labaad oo ugu weyn gobolka Hiiraan.
”Labo caruur ahna waa ay dhimatay labo kalana dhaawac halis ah ayaa soo gaaraya, mid ka mid ah caruurta waxaa uu ku jiraa xaalad miir-daboolan ah, waxaana lagu daweynayaa isbitaalka Buula-burte,” ayuu yiri Cismaan Geedi.
Sidoo kale, duqa Buula-burte ayaa ku eedeeyay qaraxa ay carruurtaan ku geeriyoodeen Al-shabaab oo sida uu sheegay go”doominta ay ku hayaan degmada u isticmaala waxyaabo qaraxa ay ku aasaan daafaha magaalada.
Guud ahaan Soomaaliya marka la eego 24-kii sano ee lasoo dhaafay tiro caruur ah ayaa u geeriyootay kuwo kale oo badanna waxay ku waayeen xubno muhiim ah oo jirkooda ka mid ah waxyaabaha qarxa oo ay isku adeegsadaan dhinacyada iska soo horjeeda.